2 hp motera herinaratra 3450 rpm tefc, 2hp 240v herinaratra mandeha amin'ny lafiny herinaratra
2 hp herinaratra tokana tsipika 3450 rpm tefc, 240V
2hp motera herinaratra amidy
Ireo moto herinaratra 2hp
2hp moto elektronika 1750 rpm, 2hp moto herinaratra 3 fantsona, 2hp motera herinaratra miaraka amin'ny VFD, 2hp moto elektronika 1750 rpm dingana tokana.
Inona ny motera herinaratra 2hp?
2hp motera elektrika 3 dingana ary motera elektrika 2hp dingana tokana; 2hp karazana maotera elektrika AC ary karazana DC; Môtô 2 hp 56c ary maotera frame IEC 2 hp.
Ny motera elektrika 2hp miaraka amin'ny VFD dia mety hahatonga ny hafainganam-pandeha miovaova, tanjona ankapobeny hahatrarana fitomboana lehibe eo amin'ity orinasa ity.
Fa maninona no nifidy ny maotera herinay 2hp?
Amin'ny maha-mpamatsy moto eran-tany antsika, dia manome maotera herinaratra 2hp izahay. Natsangana ho orinasa manana ny laharam-pitantanana ho an'ny taona 2003.
Kalitao hatsaran'ny tarika 2hp Electric
Ny karazana mamatsy herinaratra 2hp 110V, 2hp motor motor 3450rpm, 2 hp 56c frame motor, 2 hp motera herinaratra ho an'ny sambo.
Fahaiza-miasa mahomby indrindra amin'ny adidy matanjaka, miaraka amin'ny tariby varahina rehetra ao anatiny, fahombiazany: 86.0%; Fanakonana: Voahidy tanteraka, insulated avo. 2hp maotera elektrika misy fampisehoana tonga lafatra.
Tsara kokoa sy vita, fanatsarana kalitao, mitombo amin'ny lafiny rehetra, AISI 4140 akora akora, mora hamakiana stainless steel nameplate.
Misy karazana motera elektrika 2 hp ao anaty tahiry ary halefanay ao anatin'ny 2 andro rehefa voarainay ny kaomandinao.
Ny fampahalalana rehetra dia tohanan'ny fiantohana 2 taona. Ny injenieranay dia miomana amin'ny tsy ampoizina, ka tsy mila miahiahy momba ny olan'ny motera elektrika 2hp ianao.
Ny motera herinaratra 2hp dia hitazomana ny asa ataonao ary mihazakazaka, miaraka amin'ny paikady mahay mandanjalanja, ny famokarana be loatra, ny sivilikan'ny Class H insulation, mety tsara sy vita.
Tepiany iray halefa
Amin'ny maha mpanamboatra antsika, manohana izahay mba hivarotra miorina amina vondrona iray. Ampiasaina betsaka amin'ny Feeders, conveyor, mpankafy, mpandrafitra, compressor, mpanondrana rano, grinders, lifior na paompy.
Tanjona goavan'ny indostrian'ny herinaratra indostrialy 2hp miaraka amin'ny vy na vy na Aluminum, novolavolaina mba hihaona amin'ireo fampiharana samihafa misy fampisehoana lehibe sy toekarena.
2hp motor motor 1750 rpm Fanomezana feno mpankafy natoto, 2hp moto 1750 rpm dia hita ao amin'ny Open Drip-proof ary TEFC fananganana amin'ny dingana tokana. Ny kitran'ny herinaratra IronHorse 2hp 3 dingana, tsipika 24mm Electric moto tokana 240v ho an'ny mpangaro simenitra. Tanjona ankapobeny 2 hp herinaratra 1725 rpm dingana tokana, 2 hp herinaratra herinaratra miovaova sy hafainganam-pandeha, 1 / 2 hp môtika herinaratra, 2hp moto elektrika tokana.
Tambajika herinaratra Duty 1hp, motera herinaratra 2hp tsy misy vidiny miaraka amin'ny VFD, Compressor Duty 2hp moto elektrika 110V, fantsom-bidy feno 2hp motor motor amps, motor 2hp herinaratra 3450 rpm ho fampiasa any izay misy ny fahitana rano, vovoka ary vovoka, China motor 2hp amidy, 2 hp 56c frame motor Frame 5 / 8 "Shaft Single Phase 115 / 230 Volt 3450 RPM TEFC.
Fan Pump Compressor General tanjona 2 hp herinaratra 3450 rpm tefc, ny fisehoana ny fivoahana 2 hp motor motor boat, motor motor 2 hp mahery vaika dia mandeha môtô tokana mahery vaika natao indrindra ho ampiasaina amin'ny tsofa eo amin'ny latabatra.
MAHAFINAO CATALOG PDF
2hp motera herinaratra 1750 rpm dingana tokana, 2hp 240v fantsom-pitaovana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra, 2hp moto miaraka amin'ny VFD